Maamulka Degmooyinka Gobolka Jarar Oo Shirkii Qiimaynta Ahaa U Soo Gabagaboobay - Cakaara News
Maamulka Degmooyinka Gobolka Jarar Oo Shirkii Qiimaynta Ahaa U Soo Gabagaboobay
Dhagaxbuur (cakaaranews ) Axad 10kii Aprill 2016, shir qiimayn ah oo ay kasoo qaybgaleen dhamaan degmooyinka Gobolka Jarar islamarkaana lagu qiimaynayay hirgalinta qorshayaashii 9kii billood ee ugu danabaysay ee adeegyada horumarineed iyo waliba nidaamka adeeg-bixinta ee maamulka suuban ayaa kadhacay xarunta Gobolka Jarar ee degmada Dhagaxbuur.
Hadaba shirkan ayaa waxaa hogaaminayay shirgudoona ka ahaa gudoomiyaha Gobalka Jarar mudane Cabdi Cali Mataan oo sheegay in shirkani uu yahay shirkii caadiga ahaa ee ay wada yeelan jireen maamulada degmooyinku. Wuxuuna intaa kudaray in shirkan lagu qiimaynayay qorshayaashii u yiilay degmo kasta wixii hirgalay iyo waxa aan hirgalin iyo sababta ayna u hirgalin. Sidookale wuxuu xusay masuuku in qorshahan si gaara loogu eegayay adeegyada horumarineed ee ay ugu horeeyaan Biyaha, iyada oo siqodo dheer loo lafaguray meelaha ay kala marayaan biyo-xidheenadii kasocday dhamaan degmooyinka.
Sidookale waxay tilmaameen in iyana siwayn looga hadlay hawlaha dakhliga ee degmo kasta. Waxaa kale oo aan iyana meesha kamaqanayn in si adag looga wadahadlay waxbarashada caafimaad iyo beeraha.
Ugudanbayna waxay sheegeen masuuliyiintu in shirku uu kusoo dhamaaday jawi wanaagsan iyagoo xusay in maamulka degmooyinku ay kala qaadanayaan khibrad kudayasho leh oo dagmooyinka liita ay kudayanayaan degmooyinkii fiicnaa qiimayntan. Waxayna carabka kudhufteen in iyana la islameeldhigay sixida wixii dhaliil ahaa ee qiimayntaas lagu soosaaray.